Sharciga: Oggolaansho ayaa lagu caddeeyey khamriga Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Muxuu yahay ogolaanshaha ficilka?
Maxaa dhacaya markay habeenkii guurto iyo labadaba ama labadaba dhallinyaradu aad bay uga xun yihiin cabitaanka? Marka isdul-darradu hoos u dhacaan oo ay rabaan inay isku xidho, inta qofku meel fog ka guuri karo? Goorma 'maya' macnaheedu 'maya'? Waa maxay xeerarka ciyaarta? Goorma ayay jacaylku jinsi noqdaan? Yaa go'aamiya?
Oggolaanshaha iyo Khamriga
Waxaan wareysi la yeeshay haweeney 17 jir ah oo xaalad caafimaad maskaxeed oo fudud oo ka soo jeeda asli taajir ah kana soo qeyb gashay xiisado ku saabsan ogolaanshaha iyo dhedignimada. Waxaan u wici doonaa Jan. Waxay ii xaqiijisay inay "ogtahay xadkeeda" qamriga. Markii la weydiiyay waxa ay ula jeeddo taas, waxay ku jawaabtay, "Waligay ma sakhraami doono ilaa aan iska sii daayo". Waxay tiri si kastaba ha noqotee "way rartay" ka hor intaysan u bixin xafladaha dhamaadka usbuuc dhammaadka waxayna galmo aan caadi ahayn la yeelatay rag kala duwan. Waxay qirtay inaysan waligeed la galmoon laheyn ragaas hadaan sakhraansaneyn. Mana aqbali lahayn nooca galmada, oo ay ku jiraan galmada dabada ee xun, ee ay badanaa dalbadaan. Hadana waxay sheegtay in aysan ku xukumi doonin nin inuu ku dhiiri galiyo inay galmo la yeelato xaaladahaas maxaa yeelay way cabi jirtay oo way kacsanayd. Maskaxdeeda waxay ku tiri waa inay bixineysaa ogolaansho xitaa haddii ay ka shaleyso maalinta xigta.
Qofka qaangaarka ah, 'ogaanshaha xadadka' ee khamriga waxaa laga yaabaa inuu ka lumo xakamaynta xakamaynta awood u leh inuu si xor ah u aqbalo. Khilaafaadka noocan oo kale ah ayaa ka dhigaya arrin la xiriira dhibaatada ogolaanshaha ee jaajuusyada ku jira tijaabooyinka kufsiga. Waxaan waydiiyay Jan sababta ay u qaadatay khatarta uurka ama cudurada galmada lagu kala qaado iyada oo aan la isticmaalin ka hortaga uurka. Waxay ka jawaabtay in aabaheed uu careysan lahaa haddii uu ogaaday in gabadhiisa yar ay galmo yeelatay. Waxay tiri haddii ay uur yeelatay, waxay qaadan lahayd ilmo iska soo ridid, hooyaduna way ku caawin lahayd. Sidaa darteed inkastoo wadahadalka dugsiga ee mawduucan, ay ka cabsi qabaan sida waalidkeed ay uga jawaabi lahaayeen iyo cadaadiska isku midka ah ee cabbitaanka khamriga badan iyo in ay 'madadaalo' habeenkii ay ka muhiimsan yihiin qiimeynta qatarta caafimaad ee nafteeda. Kani waa maskaxda dhalinta yar ee khatarta ah.
Inkasta oo ay tahay dembi ah inuu galmo galmo aan raali ka ahayn, haweenku inta badan waxay ka cabanayaan in lagu qasbo. Research waxay muujineysaa 'ku qancin' xoog leh galmo futada ah waa dhaqan aad u caadi ah maanta dhalinyarada da'doodu tahay 16-18. Ragga dhalinyarada ah iyo haweenka waxay ku andacoonayaan filimada internetka sida dhiirigeliyaha muhiimka ah. In kasta oo ay og yihiin inay "aad u xanuun badan tahay dumarka", haddana ragga dhallinyarada ahi weli waxay ku riixeen intii suurtogal ah inay 'ka dhaadhiciyaan' haweenka inay u oggolaadaan inay sameeyaan. Xitaa ragga da'da yar runtii uma muuqan inay iyagu ku raaxeysteen. Tani Wareysiga codka ah ee 10 iyada oo hogaamiyaha cilmibaarista uu sharaxaad dheeraad ah ka bixinayo natiijooyinkooda. Kaliya hal haween ah ayaa qirtay inay ku raaxeysatay. Qaar ka mid ah ragga dhalinyarada ah, kudosyada helitaanka "baalalkooda bunni" waxay u noqon karaan hadaf adag
Is-xakamayntu waa caqabad labadaba dumarka iyo ragga labadaba, laakiin gaar ahaan xafladda xafladaha dhalinyarada. Haddii aan qorsheeynin in la dejiyo xaddidaad ayaa loo qoondeeyay go'aan hore, waxay noqon kartaa mid adag in laga hortago caqabadda xoog leh marka xiiso galmo ay ku kacaan iyo markaan rabno in loo arko inay yihiin jinsi soo jiidasho iyo 'qabow'.
Si kastaba ha ahaatee waxbarashada dheeraadka ah ee ku saabsan saameynta aalkolada ee ogolaashaha iyo sida loola macaamilayo wajiga qasabka waa lagama maarmaan. Barida 'xirfadaha shukaansiga' iyo sida loo ixtiraamo xuduudaha kale ee qofka ayaa noqon lahaa horumar hore. Dhowr baaritaan oo ku saabsan dabeecadaha dhalinyarada ayaa ugu baaqay waxbarashada noocan ah.
<< Waa maxay Oggolaanshaha Sharciga? Wasmo >>